Rap အဆိုတော် တစ်ယောက်ရဲ့ ကောင်မလေးကို အထာတွေ ပေးနေတယ်လို့ သတင်းထွက်နေတဲ့ အပေါ် ပြန်ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ ရဲရင့်အောင် – Maythadin
Rap အဆိုတော် တစ်ယောက်ရဲ့ ကောင်မလေးကို အထာတွေ ပေးနေတယ်လို့ သတင်းထွက်နေတဲ့ အပေါ် ပြန်ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ ရဲရင့်အောင်
May Thadin | September 10, 2021 | Celebrity | No Comments
အဆိုတော် ရဲရင့်အောင်ကတော့လူမှုကွန်ယက်တွင် အချိန်အတော်ကြာပျောက်နေတဲ့အတွက်ပရိသတ်များကစိတ်ပူနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ပူနေတဲ့ ပရိသတ်များအတွက် မကြာသေးခင် နာရီပိုင်းလောက်က ရဲရင့်အောင်ရဲ့ လူမှုကွန်ယက် Facebook အကောင့်တွင် ပြသနာတစ်ခုကိုပြန်ဖြေရှင်းထားပါတယ်နော်။
ဒါကတော့ Rapper အဆိုတော်တစ်ဦးမှ သူ့ကောင်မလေးကို သွားပြီး အထာပေးတဲ့စကားတွေလာပြောထားကြောင်း ss နဲ့တကွ တင်ခဲ့ပြီး ရဲရင့်အောင်ကိုလည်း သူ့ဆီဆက်သွယ်ဖို့ လူမှုကွန်ယက်ပေါ်တွင် ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရဲရင့်အောင်မှ ” ငါ မအားလို့ Messenger ငါ့ပရိတ်သတ်တိုင်းနဲ့တောင် စကားမပြောဖြစ်ဖူး။ ကိုယ့်ကိုယ် စကားတစ်လုံးမှလာမပြောဖူးတဲ့လူဆို ဝေးရောကွာ… အဲ့တစ်ယောက်တောင် တော်တော်ကံကောင်းလို့ ငါစာပြန်ဖြစ်တာဖြစ်မယ်။
မင်းဘက်က ဝင်ကြည့်ခွင့်ရနေတဲ့ conversation အပြည့်အဝမှမဟုတ်တာကွာ Delete လုပ်ထားတာကိုး။ တစ်ဖက်က နာမည်တွေ ပုံတွေငါဖြတ်ပေးထားပါတယ်။မင်းငါ့ကို ပြန်တောင်းပန်ပါ။
လီးတဲ့မ ကိုယ့်ဘဝကိုယ် ဖြေရှင်းနေရတာအပြင် ခွေးသားတွေ စောက်ရူးထတာလိုက်ရှင်းနေရတယ် မင်း ငါနဲ့ ငါ့ကောင်မလေးကို by name နဲ့ Pubilcမှာစော်ကားထားတာကို တောင်းပန်ပါ။
မင်းထပ်လိုချင်ရင် အဲ့ဒီProfile ရော နာမည်ရောငါပြန်တင်ပေးမယ်။ အဲ့ဒီမှာ မင်းလိုချင်တဲ့ Attention. မင်းနာမည်ထည့် မရေးဘူးလက်သနလို့ငါနဲ့ပွဲရှာပြီး အတန်ရှည်ယူနေရတယ်ဆိုတော့
အခွေတွေဘာတွေထွက်တော့ မလို့ထင်တယ်အောင်မြင်ပါစေ မအေလိုးလေး လီးတဲ့မကွာ …” ဆိုပြီး ပြန်ဖြေရှင်းထားတာပါ။ ရဲရင့်အောင်တင်တဲ့ SS ကိုကြည့်ပြီး သူမှားမှန်းသိသွားတာကြောင့် Rapper အဆိုတော် Ian-5GL မှ တောင်းပန်ကြောင်း ပြန်ရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။
အဆိုေတာ္ ရဲရင့္ေအာင္ကေတာ့ လူမႈကြန္ယက္တြင္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ ေပ်ာက္ေနတဲ့အတြက္ ပရိသတ္မ်ားကစိတ္ပူေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
စိတ္ပူေနတဲ့ ပရိသတ္မ်ားအတြက္ မၾကာေသးခင္ နာရီပိုင္းေလာက္က ရဲရင့္ေအာင္ရဲ႕ လူမႈကြန္ယက္ Facebook အေကာင့္တြင္ ျပသနာတစ္ခုကို ျပန္ေျဖရွင္းထားပါတယ္ေနာ္။
ဒါကေတာ့ Rapper အဆိုေတာ္တစ္ဦးမွ သူ႕ေကာင္မေလးကို သြားၿပီးအထာေပးတဲ့စကားေတြလာေျပာထားေၾကာင္း ss နဲ႕တကြတင္ခဲ့ၿပီးရဲရင့္ေအာင္ကိုလည္း သူ႕ဆီဆက္သြယ္ဖို႔ လူမႈကြန္ယက္ေပၚတြင္ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီကိစၥနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ရဲရင့္ေအာင္မွ ” ငါ မအားလို႔ Messenger ငါ့ပရိတ္သတ္တိုင္းနဲ႕ေတာင္ စကားမေျပာျဖစ္ဖူး။ ကိုယ့္ကိုယ္ စကားတစ္လုံးမွလာမေျပာဖူးတဲ့လူဆို ေဝးေရာကြာ… အဲ့တစ္ေယာက္ေတာင္ ေတာ္ေတာ္ကံေကာင္းလို႔ ငါစာျပန္ျဖစ္တာျဖစ္မယ္။
မင္းဘက္က ဝင္ၾကည့္ခြင့္ရေနတဲ့ conversation အျပည့္အဝမွမဟုတ္တာကြာ Delete လုပ္ထားတာကိုး။ တစ္ဖက္က နာမည္ေတြ ပုံေတြငါျဖတ္ေပးထားပါတယ္။မင္းငါ့ကို ျပန္ေတာင္းပန္ပါ။
လီးတဲ့မ ကိုယ့္ဘဝကိုယ္ ေျဖရွင္းေနရတာအျပင္ ေခြးသားေတြ ေစာက္႐ူးထတာလိုက္ရွင္းေနရတယ္ မင္း ငါနဲ႕ ငါ့ေကာင္မေလးကို by name နဲ႕ Pubilc မွာေစာ္ကားထားတာကို ေတာင္းပန္ပါ။
မင္းထပ္လိုခ်င္ရင္ အဲ့ဒီProfile ေရာ နာမည္ေရာငါျပန္တင္ေပးမယ္။ အဲ့ဒီမွာ မင္းလိုခ်င္တဲ့ Attention. မင္းနာမည္ထည့္ မေရးဘူးလက္သနလို႔ငါနဲ႕ပြဲရွာၿပီး အတန္ရွည္ ယူေနရတယ္ဆိုေတာ့
အေခြေတြဘာေတြထြက္ေတာ့ မလို႔ထင္တယ္ေအာင္ျမင္ပါေစ မေအလိုးေလး လီးတဲ့မကြာ …” ဆိုၿပီး ျပန္ေျဖရွင္းထားတာပါ။ ရဲရင့္ေအာင္တင္တဲ့ SS ကိုၾကည့္ၿပီး သူမွားမွန္းသိသြားတာေၾကာင့္ Rapper အဆိုေတာ္ Ian-5GL မွ ေတာင္းပန္ေၾကာင္း ျပန္ေရးသားထားခဲ့ပါတယ္။
ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူဝတ်မှုန်ရွှေရည်မှ မင်းသမီးချောဝတ်မှုန်ရွှေရည်အား အလုပ်ဆက်မလုပ်တော့ပဲလက်တွဲဖြုတ်ကြောင်း ကြေငြာလာသောအခါ